News Team – Classic Khabar
Jun152021 by News TeamNo Comments
यतिखेर फेसबुकदेखि टिकटकसम्म भाइरल भइरहेको विषय हो– चितवनकी सविता भण्डारीको मृत्यु प्रकरण। उनीप्रति न्याय माग्दै सामाजिक सञ्जालमा ह्यासट्याग नै चलिरहेको छ, जस्टिस फर सविता भण्डारी। सोसल मिडियामा सविताको मृत्युको बहसको विषय बनेको छ। यो घटनामा माईती पक्ष अनी घर पक्ष भएर धेरै अधिकार कर्मीहरु उभिरहेका छन् । सबिता भण्डारीको मृत्‍युलाई अस्वाभाबिक मृत्‍यु भनिरहदा एक पक्षले ह’ ‘त्या भनेको छ भने अर्को पक्षले देहत्याग भनिरहेको छ । यता मृतकको माइती पक्षले भने आफूले न्याय नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। ‘तीन दिनअघि मात्रै लुगा किन्नलाई मसँग पाँच हजार पैसा मागेकी थिई, देहत्याग नै गर्ने भए किन पैसा माग्थी?’ एक युट्युब च्यानलमा बहिनी सजनीले आ शंका व्यक्त गरेकी छिन्। प्रहरीले झु क्याएर मुचुल्कामा साइन गराउन लगाएको आरोपसमेत उनले लगाएकी छिन्। ‘प्रहरीले यहाँ साइन गरेपछि केस सुरु हुन्छ भनेछन्। दाइले मुचुल्का भ
Jun142021 by News TeamNo Comments
आठ बर्षको सानै उमेरमा बिहे गरेर महिना दिन नबित्दै श्रीमानको मृत्यु, बिहेपछी झण्डै ८० वर्ष एक्लै जिबन बिताएकी वसुन्धरा
सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भरमा वसुन्धरा शर्माको चुल्हो बल्छ । परिवारमा अरू कोही छैनन् । खेती गरेर खाने जमीन छैन, उमेरले पनि डाँडा काटेकाले काम गरेर खानसक्ने कुरै भएन । बिहे गरेको महिना नबित्दै श्रीमान्को मृ त्यु भएपछि बिहेपछिका झण्डै ८० वर्ष उहाँले एकल जीवन बिताउनुभयो । आठ वर्षको उमेरमा उहाँको बिहे भएको थियो । बागलुङको जैमिनी नगरपालिका–१ कुश्मीशेराकी उहाँ ८८ वर्षकी हुनुभयो । उहाँको जिउने आधार एउटा सानो कुटी थियो । गत वर्षको वर्षायाममा त्यही कुटीमा समेत विपत्ति आइलाग्यो । गत भदौ २८ र २९ गतेको वर्षापछि जग नै भासिएर घर जमीनमुनि पुग्यो । वसुन्धराले एक वर्ष निकै कष्टले बिताउनुभयो । घर भाँसिएपछि पीडाको सीमा रहेन । छिमेकीको घरमा आश्रय लिएर बस्नुभयो । वसुन्धारको खुशी एक वर्षपछि फर्किएको छ । नगरपालिकाले भाँसिएको घर पुनर्निर्माण गरिदिएपछि वसुन्धराको आँखामा अहिले हर्षका आँसु देखिन्छन
पाथिभरा माताले हामी सबैको रक्षा गरुन, जेष्ठ ३१ गते सोमबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
आज श्री शाके १९४३ बि.स.२०७८ साल जेष्ठ ३१ गते सोमबार इश्वी सन २०२१ जुन १४ तारीख जेठ शुक्लपक्ष चतुर्थी तिथी तिष्य नक्षत्र धु्रब योग पश्चात व्याधात योग भद्रा करण चन्द्रमां कर्कट राशिमा आनन्दादि योगमा धाता योग राक्षसनाम संवत्सर सुर्य उत्तरायणं ग्रीष्म ऋतु विश्व रक्तदाता दिवस (ज्यो.प.सरोज घिमिरे) मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) पारीवरिक मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । कार्य प्रतिको लगनसिलताको कदर हुने समय रहेकोछ । भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगमा अधिक समय बित्नेछ । ब्यपार ब्यवसायमा समय उत्तम रहनेछ । प्रेम सम्बन्धमा प्रगाढता छाउनेछ । मानसम्मान प्राप्तीको समेत योग रहेकोछ । बृष राशि (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) मित्रजनहरुको अधिक सामिप्यता कष्टकर साबित रहनेछ । सामान्य पारीवारिक झोरझमेलाको सामना गर्नुपर्नेछ । यात्रामा पनि साबधानि पूर्वक अधिबढ्नुहोला । अध्यन अध्यापनमा समय मध
Jun132021 by News TeamNo Comments
“म दिनदिनै यो पीडा सहन सक्दिनँ,म भित्रबाट नै कमजार भइसकेँ”सबितालाई कती तनाब थियो होला ? (भिडियो सहित)
दुई साताअघि चितवनमा एक महिलाको शंकाष्पद मृत्यु भयो । २८ वर्षीया सविताको मृत्यु स्वभाविक नभएको भन्दै उनको माइती पक्ष प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिए । मुद्दा अदालतमा बिचाराधीन छ । तर, अहिले यो घटनासँग सम्वन्धित विभिन्न पात्रका थरिथरि बयान यूट्यूवमा भाइरल छन् । यति मात्रै होइन, सविताका अडियो-भिडियोलाई पनि यूट्युवरले छ’ताछु’ल्ल बनाएका छन् । अनि ती अडियो-भिडियोमा लि’पसिं’क गरेर टिकटकमा भाइरल बन्न खोज्नेको अर्को समूह छ । यस्तो विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरी-प्रशासनले खासै चासो दिएको छैन सात वर्षअघि वैशाख ३ गते सविताको चितवनका योगेन्द्रकुमार धितालसँग मागी विहे भएको थियो । घरमा श्रीमान, ससुरा, सासु र एक पाँच वर्षीय छोरा छन् । गत वैशाख ४ गते सविता आफ्नै कोठाभित्र झु’ ‘ण्डि’एको अवस्थामा फेला परेकी थिइन् । परिवार र छरछिमेकीले उनलाई चितवन मेडिकल कलेजमा पुर्‍याएका थिए । अस्पताल लैजाँदासम्म उनी जीवित रह
सबितालाई तड पाइ तड पाइ मा रेको र डोरी काट्नु अघिनै मो री सकेको खुल्यो रहस्य
ससुरा ले बुहारी को गो प्य अ ङ्ग मा छुने जस्ता नराम्रा हर्कत गरेका भिडियोहरु एकाएक मिडियामा आएपछि अहिले माहोल तातिएको छ । परिवार भित्रै असुरक्षित बनेका छन नेपालमा महिलाहरु भन्दै धेरैले यस घटनाको वि रो ध गरेका छन् । आफ्नै बुहारीमाथि कु दृष्टि लगाउने ससुरालाई देशव्यापी रुपमा क डा का र बा हीको माग भइरहेको छ । यद्यपि घटना निकै र ह स्यमय रहेकाले प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । के हो त वास्तविकता त्यो आउन बाँकी नै रहेको छ । सबिता भण्डारीको माइतीपक्षले ह त्या नै ग रेको हो भन्दै न्यायको माग गरिरहेका छन् । घटनाको प्रकृति हेर्दा आफै गरेको दे ह त्या ग होइन भन्दै देश तथा विदेशमा रहेका धेरै नेपालीहरुले चौतर्फी वि रो ध गर्दै आएका छन् । बुहारीलाई ससुराले छोरीको रुपमा हेर्नुपर्ने तर आफ्नै छोरी समान बुहारीलाई पटकपटक दु र्व्य वहार ग रे पछि सहन नसकेर यस्तो भएकाे भन्ने अ ड्क ल पनि धेरैले गरेका छन । सबैल
Jun122021 by News TeamNo Comments
तपाईले हेर्न चाहेको भिडियो, सविताको श्रीमानको पहिलो श्रीमतीकी दाजु भाउजु मिडियामा (भिडीयो हेर्नुस)
अहिले सामाजिक संजालमा तातिएको घटना चितवनकी सबिता भण्डारीको मृत्यु प्रकरणमा अहिले अनेक पाटो हरु केलाउने क्रम जारी छ । मिडियाले अहिले यो घटनाको बिभिन्न पाटोहरु केलाएका छन। गत बैशाख ४ गते सविताको आफ्नै घरमा मृत्यु भए पछी सविताको माईति पक्षले भने यो घटना सुनियोजित हो भनेका छन् भने यतिबेला यो घटना अदालतमा रहेको छ। घटनामा आरोपी भनिएका सबिताका श्रीमानको पहिलो श्रीमती संग डिभोर्स भएको थियो र उनले सबिता संग दोश्रो बिबाह गरेका थिए। अहिले सामाजिक संजालमा पहिलो श्रीमती संग घर परिवारको बारेमा बुझ्न निकै आग्रह पछी अहिले उक्त पहिलेको श्रीमतीको दाजु संग पहिलेको कुरा केलाउने प्रयास गरेका छन् निजगढ न्युज का पत्रकारले । यो पनि: महोत्तरीमा ‘कुल देउता’ घरमा राख्ने विवादमा दाईले भाईलाई सिध्याए, महोत्तरीमा घरको कुलदेवता घरमा राख्ने विषयमा दाजुभाईबीच भएको विवादका क्रममा एक जनाको मृत्यु भएको छ । कुल देवता एक
दुर्घटनामा परेर घाइते भएकी कलाकार निशा ३ बर्षमै यस्तो दर्दनाक अवस्थामा,देखेर नरुने को होला र ?
दुर्घटनामा परेर निकै दर्दनाक अवस्थामा पुगेकी कलाकार तथा मोडल निशा घिमिरेको उद्दार भएको छ । उनले उपचार पाउने भएकी छन् । नर्भिक अस्पतालले उनको उपचारको जिम्मा लिँदै घरवाट उद्दार गरेको छ । नर्भिक अस्पतालकी प्रबन्ध निर्देशक मेघा चौधरी उनको घरमै एम्बुलेन्स लिएर गएर उद्दार गरेकी हुन् । सामाजिक सजाल र समाचारहरुमा मेघाको अवस्था देखेपछि उनले उद्दार गरेको बताएकी छन् । तीन वर्षअघि मोडल रहेकी निशा घिमिरेको अहिलेको अवस्था पत्याउनै नसक्ने ‘दर्दनाक’ देखिएको देखिन्छ । उनको तस्बिर हेर्दा चिन्नै नसकिने भएकी छन् । उनका आफन्तलाई समेत चिन्न मुस्किल पर्ने भएकी छन् । उनको तौल घटेर २० केजी भएको छ भने मांसपेशीहरु पनि निकै दर्दनाक अवस्थाको छ । उनी बोल्न सक्दिनन् तर अरुले बोलेको कुरा सुन्छिन् । अरुका कुरा सुनेर आँसु पनि खसाउँछिन् । दुर्घटना भएको केही समय सम्म भारतकै अस्पतालमा उपचार गरिएको भएपनि आर्थिक अवस्थाले
कलाकार निशा घिमिरे पहिले यस्ती थिइन् अहिले यस्ती भईन,एउटा गल्ती ले यस्तो भयो ? (भिडियो सहित)
नेपाली कला क्षेत्रमा जम्दै गरेको एउटा नाम हो निशा घिमिरे । कुनै बेला चमकधमक रहेको उनको जिन्दगी अहिले बेसहारा बनेको छ । निकै नै दयनीय अवस्थामा उनलाई देख्न सकिन्छ । उनको अहिलेको यो अवस्था देख्दा निस्शब्द नुहने सायदैं होलान् ।कुनै समय सिनेमाको रंगीन दुनियाँमा आफ्नो पहिचान बनाउन संघर्षरत अभिनेत्री हुन् निशा घिमिरे । तीन दर्जनभन्दा बढी म्युजिक भिडियो, केही टेलसिरियल तथा छोटा फिल्महरुमा आफ्नो प्रतिभालाई धेरथोर उनले प्रस्तुत गरिसकेकी छन् । ललितपुर कालेश्वर, बतासेकी उनी यसक्षेत्रमा केही गरेरै छोडने अठोटका साथ लागि परेकी थिइन् । भविष्यमा एक सफल कलाकार बनेर आमदर्शकमाँझ चिनिने उनी यतिखेर चकनाचुर। अभिनय पढ्ने सिलसिलामा उनी केही समय अगाडि भारतमा गएकी थिइन्। शो क्रममा उनी सवारी दुर्घटनामा परेकी हुन् । भारतको तेरादुनस्थित निशा सहितको ४ जना विद्यार्थी सावार रहेको कारमा ट्रकले टक्कर दिंदा दुर्घटना
पाथिभरा माताले हामी सबैको रक्षा गरुन,जेष्ठ २९ गते शनिबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
आज श्री शाके १९४३ बि.स.२०७८ साल जेष्ठ २९ गते शनिबार इश्वी सन २०२१ जुन १२ तारीख जेठ शुक्लपक्ष द्वितीया तिथी आद्रा नक्षत्र गण्ड योग पश्चात वृद्धि योग कौलव करण चन्द्रमां मिथुन राशिमा आनन्दादि योगमा मु’द्गर योग राक्षसनाम संवत्सर सुर्य उत्तरायणं ग्रीष्म ऋतु ,बालश्रमविरुद्ध दिवस (ज्यो.प.सरोज घिमिरे) राशि नक्षत्रहरूको एउटा घे’रा अथवा समूह हो जसको माध्यमबाट सूर्य, चन्द्रमा, र ग्रह आकाशमा पारगमन गर्छन । ज्योतिषहरूले यि नक्षत्रहरू माथि ध्यान दिए र यिनलाई केही विशिष्ट महत्त्व दिए । समय संग-संगै उनीहरूले बारहौं नक्षत्रहरूको विशिष्टताहरूलाई ध्यानमा राखेर त्यसमा आधारित बारह राशिहरूको एक प्रणाली बनाए । राशीहरू मूलतः काल्पनिक तारापुञ्जहरू हुन् । सूर्यले पृथ्वीको वरिपरि ब्रह्माण्डमा घुम्ने बाटो वृत्त (वास्तवमा केही दीर्घवृत्त) ३६० डिग्रीको हुन्छ । यसलाई १२ भागमा विभाजन गरिएको छ, प्रत्येक ३०/३० डिग्री
Jun112021 by News TeamNo Comments
उपचार पाएपछि निशाको अनुहारमा देखिन थाल्यो छुट्टै चमक
नर्भिक अस्पतालमा उपचार सुरु भएपछि मोडल निशा घिमिरेको अनुहारमा चमक देखिएको छ । जीवन म’रणको दोसाधमा रहेकी उनको अस्पतालको बेडबाट ताजा तस्वीर सार्बजनिक भएको छ । जस्मा उनी मन्द मुस्कुराईरहेको महसुस गर्न सकिन्छ ।भोजपुरी फिल्म मधेसी पुत्र २ का साथमा डियर जिन्दगीलगायतका केही टेलिसिरियलकी अभिनेत्री तथा काठे लोक दोहोरी गीत सानु माया हाँसेर बोल, ट्याक्सी मोटर कार, आज निस्ठुरीको फोटोजस्ता करिब दुई दर्जन म्युजिक भिडियोकी मोडल निशाको सानैदेखि कलाकारितामार्फत नाम कमाउने सोच थियो। कसैले केही कुरा गर्यो भने सुन्न सक्छिन् र आँसु बगाउने गर्छिन् तर जवाफ दिन वा अरुलाई रेसपोन्स गर्न सक्दिनन् । हातखुट्टा नै कुँजिएर ओछ्यान परेको ३ वर्ष भैसक्यो ।हिजो बिहीबार बिहान उनको उद्धार गरिएको हो । उनलाई लिन नर्भिक अस्पतालको एम्बूलेन्स गएको थियो । प्रारम्भिक जाँचको क्रममा उनमा नशाको समस्या देखिएको छ । शरीरका महत्वपूर्ण
रात दिन श्रीमानको शा रीरिक स म्प र्कको या तना सहन नसक्दा (459)
बिन्ति गरिन सन्तोषीले तर श्रीमानले छोडेनन् (410)
जेल बाट छुटेपछि रुँदै सपनालाई सम्झेर बिनयले भने म सपनालाई स्वीकार गर्छु भन्दै आशु रोक्न सकेनन (भिडियो) (396)